Lenovo inotungamira nzira yekuchaja iyo Apple Magic Mouse | Ndinobva mac
Lenovo inotungamira nzira yekuchaja yeApple Magic Mouse
Zvakawanda sekuda kwandinoita Apple Mouse Mouse, hazviite kuti unzwisise kuti vanga vaine sei "zano rakajeka" rekuisa iyo kuchaja chiteshi pazasi pegonzo kusiya iyo yekunze isingabatsiri zvachose painobhadharisa.
Mupfungwa iyi tinofanirwa kutaura kuti shanduko yeApple muMagic Mouse iyi yakaitika panguva yavaida kuwedzera bhatiri recharge kuti ritsive mabhatiri chaiwo. Ichi chinhu chingadai chakagadziriswa kwenguva yakareba asi Hatina kuona shanduko munzira yekuchaja uyezve munzvimbo yechiteshi ichi.
Lenovo Inosvitsa Wireless Mouse ine Wireless Chaja
Uye ndezvekuti hazviratidzika kunge zvakaomarara kuwedzera mujaho wewired kune ekunze ekunze sezvatakaona kana kuona nemamwe mabrand. Zvino Lenovo achangobva kuunza yayo Lenovo GO, mbeva ine waya isina waya uye haina waya zvachose.
Uye zvakare, iyi nyowani Lenovo mbeva inobvumidza kana kuti inowirirana neQi kuchaja saka chero chechaji yekuchaja inoenderana Uye isu tese tinoziva izvozvo kune chaiwo mat-kunge kuchaja madoko saka tinenge tichichaja iyo mbeva isu tichiishandisa. Asi mune ino kesi Lenovo zvakare inowedzera imwe mhando ye "yekunze bhatiri" iyo yandinogona kuburitsa Mouse yako uye nezvimwe zvinongedzo nekutenda kune USB C zviteshi iyo inosanganisirwa.
Isu hatisati tanzwisisa kuti Apple muchizvarwa chitsva cheMac haina kuwedzera kana kugadzirisa chiteshi chekuchaja muMagic Mouse (kuwedzera kuwedzera iwo mavara akanaka) kubvumidza kubhadharisa paunenge uchipfeka. Kana iwe usiri kuda kuwedzera isina waya kuchaja nyatso shandura nzvimbo yechiteshi kuti vashandisi vakwanise kuchaja ivo vachishandisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Lenovo inotungamira nzira yekuchaja yeApple Magic Mouse
Apple inopisa yazvino timu yekushambadzira kusaina kwemasogynistic makomendi
Iyo kirasi yekumhan'ara mhosva inopokana neApple yemifananidzo yeMacBook Pro 2011 yakatopindurwa makore manomwe apfuura